नेपाल आज | विद्यार्थीको शिक्षामा परिवारको ठूलो भूमिका हुन्छः कुमार थापा[भिडियो]
बुधबार, ०३ भदौ २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
नेपाल आजसँग कुरा गर्दै बृहस्पति विद्यासधनका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षा व्यवस्थापक कुमार थापाले लकडाउनलाई विद्यार्थीले कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने बारे केही जानकारी दिनुभएको छ । लकडाउनलाई समस्याको रुपमा नलिई सम्भावनाको खोजी गर्ने मौका पाएको हो भनेर उहाँले बताउनुभयो ।
धेरै मान्छेलाई आफ्नो क्षमता के हो भनेर जान्नै दुविधा हुन्छ । यस्तो बेला मान्छेले आफूले आफैलाई कसरी चिन्ने ?
यो सही कुरा हो । कतिपय मान्छेहरु ४० वर्ष ५० वर्ष बितिसके तर आफ्नो क्षमता नचिनेको हुन सक्छ । यो चै प्रयोग हो, मैले गएको हप्ता के कुरा गर्दा बढी आन्दित भए भनेर मैले सोच्न, सोध्न त सक्छु नि आफूलाई । मैले अस्ति २ घण्टा गणित अभ्यास गरेको थिएँ, मलाई कस्तो रमाइला लाग्यो भनेर सजिलै तरिकाले पनि सोच्न सकिन्छ नि त । अथवा शिक्षकले तिमी यो कुरामा राम्रो छौ है भनेको पनि हुनसक्छ । आफ्रले आफूलाई चिन्नको लागि अभ्यास गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ ।
कुनै पनि मान्छे एक्सट्रोर्भट छ भने इन्ट्रोर्भट र इन्ट्रोर्भट छ भने एक्सट्रोर्भट हुन सक्छ की सक्दैन ?
सक्छ । म आफै एउटा उदाहरण छु । मलाई लाग्छ म एकदमै इन्ट्रोर्भट हो । मैले कलेज पढ्दासम्मको मेरो अनुभव हेर्दाखेरी र अस्ति भर्खरी सम्मको पनि अनुभव हेर्दाखेरी म हत्तपत्त मान्छेहरुसँग बोलिहाल्ने स्वभावको होइन । म एक्लै बसेर पढ्ने, एक्ले बसेर टिभी हेर्नेमा म बढी रमाइरहेको हुन्छु । तर जब म सोसलाइज हुनुपर्ने बेला आउँछ म त्यहाँ राम्रोसँग बेलीराखेको छु । भनेपछि त क चाहिएको बेलामा म एक्सट्रोर्भ नै भइराख्या छु र अरु बेला म इन्ट्रोर्भट छु ।